ကျောက်တော်မှာ တပ်မတော်စခန်းအနီး ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်၊ ကျောင်းသားကလေးတစ်ဦး ကျည်ထိသေဆုံး
ကျောက်တော်မှာ တပ်မတော်စခန်းအနီး ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်၊ က...
6 ธ.ค. 2562 - 15:51 น.
တိုက်ပွဲတွေ အပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ရခိုင်မြောက်ပိုင်းက ကျောက်တော်မြို့ပေါ်မှာ ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်နေ့မနက်ပိုင်းက ပေါက်ကွဲမှု တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တပ်မတော်ဘက်က ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာမှာ အသက်ရှစ်နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားကလေးငယ်တစ်ဦး ကျည်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
တပ်မတော်စစ်ကြောင်းက ကျောက်တော်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ ရွှေကျောင်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဓမ္မာရုံနဲ့ အဲဒီအနီးက ကုန်သွယ်ရေးဂိုဒေါင်တွေမှာ နေရာယူထားတာဖြစ်ပြီး ရွှေကျောင်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအလွန်က တံတားအနီးမှာ မနက် ၉ နာရီ ၅ မိနစ်လောက်မှာ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။
ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တပ်မတော်ဘက်က အနီးဝန်းကျင်နေရာတွေကို လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်မှုတွေ ပြုလုပ်ရာမှာ ပိုက်သည်ရပ်က အသက် ၈ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားတစ်ဦးကို ကျည်ထိမှန်ပြီး သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကျောက်တော် ပစ်ခတ်မှု ရွာသားတစ်ဦးသေဆုံး၊ ကျောင်းသားတစ်ဦး ဒဏ်ရာရ
ကျောက်တော် တိုက်ပွဲ ရွာထဲကို လက်နက်ကြီးကျ၊ အသက် ၇၀ အမျိုးသားတစ်ဦး သေဆုံး
သေဆုံးသူ တတိယတန်းကျောင်းသားလေးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကျည်လေးချက်ထိမှန်ခဲ့ပြီး ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်း သွားရောက်ယူဆောင်ခဲ့တဲ့ ဖြူစင်မေတ္တာပရဟိတအသင်းက တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောပါတယ်။
ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့နဲ့ အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းဦးစီးပထမတန်း ဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းဇော်ဦးတို့ကို ဘီဘီစီက ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမယ့် အဆက်အသွယ်မရရှိခဲ့ပါဘူး။
"အဲ့ဒီကလေးက ပိုက်သည်ရပ်ကပါ။ ပိုက်သည်ရပ်က ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာနဲ့ဆိုရင် ပေ ၈၀၀ လောက်ပဲ ဝေးပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာ သေနတ်တွေနဲ့ ရွာရှိတဲ့နေရာတွေကို တပ်က ပစ်ခတ်တယ်။ အဲ့ဒီမှာ ပိုက်သည်ရပ်က ၈ နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ဦးကို ကျည်လေးချက်ထိပြီး သေဆုံးသွားတာပါ။ အခုတော့ ဆေးရုံမှာ ပို့ဆောင်ထားပါတယ်"လို့ ဖြူစင်မေတ္တာပရဟိတအသင်းက တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
လက်ရှိမှာ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ မသိရှိရသေးပါဘူး။
ကျောက်တော်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဦးထွန်းဝင်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာမှာတော့ ပိုက်သည်ရပ်က ကျောင်းသားလေးတစ်ဦး ကျည်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့ရတာဟာ ဟုတ်မှန်ကြောင်း အတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။
အခုလိုမျိုး ပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်လာရင် ဘယ်လိုပေါက်ကွဲမှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ် နီးစပ်ရာကျေးရွာတွေ၊ လူနေဝန်းကျင်တွေကို တပ်မတော်က ပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး ဒီကနေ့ မှာလည်း တပ်မတော်ဘက်က ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့ ကျည်ထိမှန်ပြီး ၈ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ် သေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ ကျောက်တော်မြို့ခံတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ဒီနေ့မနက် ၉ နာရီ ၅ မိနစ်လောက်မှာ ကျောက်တော်မြို့တောင်ဘက်နေရာတစ်ခုမှာ ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ပေါက်ကွဲသံတစ်ချက် ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ကြားလိုက်ရကြောင်းနဲ့ ဘယ်လိုလက်နက်အမျိုးအစား ပေါက်ကွဲတယ်ဆိုတာကိုတော့ သူ့အနေနဲ့ မသိဘူးလို့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်သန်းစိန်က ပြောပါတယ်။
ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ပစ်ခတ်မှုတွေပါဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့် ကျောက်တော်မြို့တွင်းမှာ လူတွေအုပ်အော်သောင်းနင်းဖြစ်ပြီး ဈေးတွေ၊ ဆိုင်တွေကို ပစ်ပြီးတော့ ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။
ကျောက်တော်မြို့မှာ ရက္ခိုင့်တပ်တော်အေအေနဲ့ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်တာမရှိကြောင်းနဲ့ တပ်မတော်ဘက်မှာ အချင်းချင်းဖြစ်တာတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ပြည်သူတွေအလန့်တကြားဖြစ်အောင် ဖန်တီးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ အေအေရဲ့ပြောခွင့်ရသူ ခိုင်သုခက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
"ကျောက်တော်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်တာမရှိဘူးဗျ။ ဆိုတော့ ကြားရသလောက်ကတော့ စစ်တပ်က သူတို့အချင်းချင်း လူမှားပြီးတော့ ပစ်ခတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ လက်နက်ကြီးတစ်ခုခုပေါ့နော်။ ပေါက်ကွဲတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ သူတို့အချင်းချင်းဖြစ်တာလို့ပဲ သိရတယ်။ တချို့နေရာတွေမှာလည်း အရင်လည်းဖြစ်ဖူးပါတယ်။ တပ်တွင်း မကျေနပ်မှုတွေလည်းရှိတယ်။ အဲ့ဒီလို ပစ်ခတ်ကြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက် တစ်ခုရှိတာက သူတို့အချင်းချင်းပစ်ခတ်ပြီးတော့ ပြည်သူတွေကို အလန့်တကြားဖြစ်အောင်အတွက် ပစ်ခတ်ဖို့အတွက် လုပ်ကြံဖန်တီတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့"လို့ခိုင်သုခက တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။
ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အချိန်ဟာ မနက်ပိုင်း ဒေသခံတွေ ဈေးရောင်းဈေးဝယ်ပြုလုပ်တာတွေ၊ လုပ်ငန်းခွင့်နဲ့ ကျောင်းတွေကို သွားရောက်ကြတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကြောင့် ဒေသခံံတွေက စိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ရပြီး ဈေးတွေနဲ့ ကျောင်းတွေကိုလည်း ပိတ်ထားလိုက်ရတယ်လို့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်သန်းစိန်က ပြောပါတယ်။
လက်ရှိမှာ တပ်မတော်ဘက်က ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေနဲ့ လူနေရပ်ကွက်အနီးဝန်းကျင်တွေမှာ နေရာယူပြီးရှိနေတာကြောင့် တပ်မတော်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာမူတည်ပြီး ရက္ခိုင့်တပ်တော် အေအေကနေ လှုပ်ရှားနေတာတွေကို တွေ့နေရပြီး အခုလိုမျိုး မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပွားလာတဲ့အတွက် ကျောက်တော်မြို့ရဲ့ အခြေအနေက ကောင်းတဲ့ဘက်ကို ရှိလာမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ ဦးမောင်သန်းစိန်က သုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကလည်း ကျောက်တော်မြို့ရဲ့ အဝင်မှာရှိတဲ့ ကံကြီးရှင်ဘုရားမှာ တပ်မတော်ဘက်က နေရာယူထားတာကြောင့် အဲ့ဒီမှာ ပညာသင်ကြားနေကြတဲ့ စစ်ဘေးရှောင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို ပညာသင်ကြားဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကံကြီးရှင်ဘုရားကနေ တပ်ကိုဆုပ်ခွာပေးဖို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ မြို့ခံတချို့တို့ သွားရောက်မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
"တိုက်ပွဲက နယ်မြေအစုံဖြစ်လာတယ်။ နယ်ဘက်တွေ၊ လမ်းပေါ်တွေ၊ လမ်းမတွေ၊ မြို့ပေါ်တွေမှာဖြစ်လာတာဆိုတော့ အနေအထားက သိပ်မကောင်းဘူး။ တိုက်ပွဲတွေအများကြီးဖြစ်လာတာရှိတယ်။ မြို့နဲ့ အင်မတန်နီးစပ်တဲ့နေရာတွေမှာ တိုက်ပွဲတွေစိပ်လာတဲ့အနေအထားတွေ၊ တပ်စွဲတဲ့နရာရာအပေါ်မှာလည်း အများကြီးမူတည်တယ်။ မြန်မာ့တပ်မတော်ကလည်း သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် အတိုင်းအတာတစ်ခုထိကတော့ မြို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေကို ရှောင်ရှားပေးစေချင်ပါတယ်"လို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်သန်းစိန်က ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ ကျောက်တော်မြို့ပေါ်မှာ တပ်မတော်ဘက်က လှည့်လည်သွားလာနေတာတွေ၊ လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတာတွေကြောင့် မြို့ခံတွေအနေနဲ့ ဘယ်ကိုမှ သွားလာမှုမပြုလုပ်ဘဲ တစ်မြို့လုံးမှာ ငြိမ်သက်နေကြောင်း မြို့ခံတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်း ကျောက်တော်မြို့ပေါ်နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မြို့မဈေးကြီးအနီး သင်္ဘောဆိပ်ဝန်းကျင်မှာ တပ်မတော်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းအဖွဲ့က ဒေသခံတွေကို ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ဒေသတွင်း လိုင်းကားပြေးဆွဲနေတဲ့တောင်ပေါက်ကျေးရွာက ကားသမားတစ်ဦးကို မသင်္ကာလို့ဆိုပြီး ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကျောက်တော်မှာ တပ်မတော်စခန်းအနီး ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်၊ ကျောင်းသားကလေးတစ်ဦး ကျည်ထိသေဆုံး